musha ASIAN FOOTBALL STORI Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane April 12, 2020
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Elite inozivikanwa zvikuru se "The Billionaire yeRussia". Our Abramovich Childhood Story Nhoroondo pamwe ne Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama uye dzakawanda OFF uye ON- bhora zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvemamiriro ake ezvinhu anotungamirira simba kune wake anodiwa Chelsea Football Club. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanoziva zvakawanda nezvaAbramovich Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Kutanga, mazita ake akazara ndiAroma Arkadyevich Abramovich. Abramovich akaberekwa musi we 24th waOctober 1966 kuSaratov, Russia. Akazvarwa kuna baba vake, Arkady Abramovich (a state office manager) uye amai vake, Irina Michalenko (muchengeti wemba).
Kunyange zvazvo Abramovich aiva nekutanga kwakanaka kwehupenyu sezvaainge akaberekerwa kumhuri yevaJudha yepakati-kati. Nguva yake yehuduku yakaderera shure kwekufa kweamai vake apo aingova nemwedzi ye18 chete. Mwedzi miviri shure, Abramovich akarasikirwa nababa vake, chiitiko chakaita kuti ave nherera vasati vava nemakore 3.
Chero mwana upi zvake akararama kuburikidza nekurasikirwa nevabereki vose vaviri achaziva chete zvakanyanya kurwadziwa kwepfungwa kunogona kukonzera. Zvinokanganisa matambudziko epfungwa zvakauya nekurasikirwa kwevabereki vaAbramovich. Migumisiro yacho yakajeka yakave nemigumisiro mukukura kwake yakatsungirira munguva yehuduku hwake hwemazuva.
Nemafaro, baba vababa vake, Leib vakatora mutoro wekurerwa kwaAbramovich ndokumuendesa kuUkhta, guta rinokosha rekushanda muKomi Republic of Russia.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -dzidzo
Muduku Abramovich akafanana nevana vakawanda vezera rake nemamiriro ake ezvinhu, vakanyoresa kuUkhta's Public School (inoratidzwa pasi apa). Kusiyana nevezera rake, aive nemafungiro akaberekwa ebhizimisi, chiito chakamuita kuti azive kukosha kwemari uye zvikwereti zvakakonzerwa nekudziponesa.
Nokudaro, yakanga isiri nguva refu asati apinda munyika yebhizimisi nokutengesa ma teyi uye kushandisa matairi emotokari zvakanaka paaipfuurira mberi dzidzo yake pakoroji yeUkhta yekorosi uyezve, Gubkin Institute yakakurumbira yeMafuta neGasi.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Basa reMasoja
Abramovich aifanira kupedza kudzidza kudzidzira pashure pokunge akanyorwa kuti aite basa rechiuto rinomanikidzwa muuto reMasoja mu1974.
Paainge achiri kudzidziswa, Abramovich haana kufunga kuti basa rehondo rinofanira kutevera. Pane kudaro, akaronga nzira yekuisa bhizimisi rake bhizinesi zvakanaka nekuita kutengeswa kusina kutenderwa kwepiori kune vakuru.
Chiitiko chacho chakaita kuti amutse uye aponese mari yakawanda nokuda kwekuedza. Yakaratidzawo yekutanga pakati pezvirongwa zvisiri pamutemo izvo zvaizozove zvave zvichinzi ndezvakaitwa nehupfumi hwake.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutanga Kambani
Kunyange zvazvo Abramovich angave akafamba achiita nharo nemaitiro akawanda asingabvumirwi nemutemo, akaita zvakanaka akaita zvakawanda kuti ave nechokwadi chokuti kambani yake yekutanga, The Comfort Co-op (unogadzira zvidhori zvepurasitiki) yakagadzwa pamutemo.
Kubudirira kwekambani yake yekutamba kwakamubatsira kuti atange kupinda mune dzimwe nzira kusanganisira kutanga bhizimisi rake rokutanga remafuta kuOmsk region.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Zvinonzi Kubudirira kunoitika apo kugadzirisa kunosangana nemukana, chirevo chakanyatsoita zvakanaka apo Mikhail Gorbachov's (Aimbova purezidhendi weSoviet Union) akazarura mukova wekudzivirira huwandu muZ1980s. Abramovich akapinda mukati momukana kuburikidza nekuita mabhizinesi ake akawanda pamutemo nekuda kwezvikonzero.
Mamwe mashoma gare gare, akawana nyasha naBerezovsky - bhizinesi ane hukama hwepedyo nemukuru wekare weRussia Boris Yeltsin.
Vose vakaita zvinhu zvakawanda zvinokosha zvebhizimisi uye zvematongerwe enyika. Ukama hwaAbramovich naBerezovsky hwakapa Raippadhi iyo yakamuita kuti adye nevarume vane simba, akamutsigira imba mukati meKremlin ndokumupa mamwe mabhizimisi ainge akasiyana kubva mune zvigadzirwa zvemafuta kusvika kumapurazi emuruza uye kunyange kutarirwa kwevarindi. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu Uye Huru Dzimba Kurambana
Abramovich ndeye anoita bhizinesi pfuma kubva paukama hwake nevamwe kusanganisira kuroorana. Akanga akaroora Olga. Imba iyi yakaita kuti kubudirira kwekambani yekambani yake kubudirire sezvo mharidzo yake yemuchato ye2,000 rubles yakashandiswa zvakanaka nebhasiyaria reRussia mukuwedzera mari yake.
Zvinosuruvarisa, vakaroorana vakarambana mu1990 (makore matatu mushure mokuroorana kwavo). Abramovich hukama hwakatevera hahuna kuratidza kuti hunobatsira. Akasangana uye akaroora kune mutevedzeri wemhepo, Irina (akafananidzirwa naye pasi).
Chokutanga, zvose zvakaonekwa zvakanaka kwekanguva vasati varambana nekuda kweshoko rake raive nemufananidzo weRussia wekare we23, Dasha Zhukova. Kuparadzanisa kwavo kunodhura (kunokwana £ xNUMXmillion) vakaona Abramovich akarasikirwa nekuchengetwa kwevana vake 155 pamwe chete nenzvimbo dzakawanda dzaaiva nadzo muUnited Kingdom kune waimbova mudzimai wake. Mukuwedzera, akarasikirwa nehuwandu hwemuzinda wake kwaari. Zvechokwadi, hupenyu hausi Nintendo sezvo munhu asingatombofari nguva dzose.
Izvo, zvakadaro, zvinoratidzika seOligarch ine knack yemari inodhura sezvo iye mu 2017 akapedza ukama hwake naDasha Zhukova (iyekadzi ane mhosva yekuparara kwemhuri yake yechipiri). Mutengo wekuparadzanisa kwavo waikoshesa $ 9B inofanana nevakawanda, chikuru chikuru cheBritain. Ukama hwavo, zvisinei, hwakatungamirira pakuberekwa kwemwanakomana.
Panguva yechirongwa ichi. zvishoma zvinozivikanwa pamusoro peAbramovich hukama huripo.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Zvematongerwe Enyika
Abramovich akashamwaridzana nevarume vane simba muRussia yakanga isingakanganisi. Kubatana kwavo mune zvezvematongerwe enyika kwakabviswa pamusana wechidiki oligarch uyo akaita sarudzo yake mune zvematongerwo enyika semumiririri weChikkotka Autonomous Okrug, nzvimbo inoshayiwa muRussia Far East.
Kunyange zvazvo achishanda somumiririri, Abramovich yakatanga mugumisiro wekuda kubatsira kuderedza urombo munharaunda, chiito icho pakati pezvimwe zvinhu, chakakonzera kusarudzwa kwake seGavhuna weChikkotka mu2000.
Asi, zvakadaro, akazvitsaurira seGavhuna mu2008 kuitira kuti afunge nezvekutsvaga kwake Chelsea FC muEngland.
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama naPutin
Abramovich ndiye munhu wekutanga kutanga Vladimir Putin seanomutevera wepurezidhendi iyo, kusvika Boris Yeltsin. Vose ava vakabva vawana nzvimbo yakafanana mukufarira simba uye zvakabatsirana.
Doo akanga ari pedyo zvikuru zvokuti Putin aive naAbramvich akabvunzurudza vatsvaki vechikwata chemahofisi muna 1999, rubatsiro rwakakonzera mibvunzo pamusoro pehutano hwaAbrahamovich kuPutin.
Akagara panhau yacho, Mutongi Mukuru weDare Elizabeth Gloster akatonga kuti Abramovich haana kunyanya kuchinja paPutin. Maererano naye;
"Pakanga pasina chikonzero cheuchapupu chinotsigira kukakavara kwekuti Mr Abramovich aiva mukana wekutonga, kana kuti zvimwe zvakakosha, Mutungamiri Putin, kana mahofisi muhutungamiri hwake, kushandisa masimba avo nenzira yakadai kuitira kuti Abramovich awane pfuma yake zvinangwa. "
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Chelsea Purchase
Abramovich akatenga Chelsea muna 2003 paakanga achiri gavhuna wesuwa reChukotka. Maererano naye, kutenga chikamu ichocho chakanga chiri muLondon (musha wake wechipiri) chakanga chiri kupukunyuka kubva munharo asi vakawanda vaitenda kuti aiva nechinangwa chekunze chakanga chakavanzika.
Chibvumirano chakaendesa Chelsea mumatare eOligarch chakapedzwa mumaminitsi e15, nguva pfupi yakapa maRoma kuzivikanwa kwenyika dzakawanda kunze kwekuzivikanwa kwaaigara muRussia.
Kufambira mberi kusvikira zuva, mamiriro ekuRoma anotungamira nesimba mumakwikiti akashandura kuva rimwe remakwikwi makuru munyika yose. Mukuwedzera, anoita kunge akatendeseka akawana kupukunyuka kubva pakusuruvara kuti pane zvimwe zvikonzero zvakaita kuti atenge chikwata.
CHOKWADI KUTI: Vongai nekuverenga kwedu Roman Abramovich Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Sheikh Mansour Nyaya Dzebhudhi Nenyaya Plus Untold Biography Facts
Lorenzo Sanz Childhoood Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Aleksander Ceferin Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Malcolm Glazer Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Michel Platini Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Son Heung-min Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 26, 2019
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 25, 2019